कसैको तागत छ भने सरकार ढालेर देखाऊ, घरमा बसेर उफ्रेर हैन : मन्त्री भट्टराई ! – yuwa Awaj
कसैको तागत छ भने सरकार ढालेर देखाऊ, घरमा बसेर उफ्रेर हैन : मन्त्री भट्टराई !
ताप्लेजुङ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले सरकार वि’रुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव काल्पनिक कुरामात्रै भएको बताएका छन् ।
पार्टी नेतृत्वबीच केन्द्रमा वि’वाद चलिरहँदा गृहजिल्ला ताप्लेजुङमा एक साता बसाइका लागि आएका मन्त्री भट्टराईले पार्टी नफुट्ने दाबी पनि गरे । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दो’लनको इतिहास मूलत: विभाजनको इतिहास छ,’ भट्टराईले थपे,
पछिल्लो समय त्यो बद्लिएको छ विभाजन सजिलो कुरा हो एकता बडो कठिन कुरा हो । कठिन भए पनि राष्ट्रको आवश्यकताले त्यो कठिन बाटो हिँड्नै पर्छ ।’ एकताको बाटो सुरुआत गर्दा पार्टीलाई जहाँ पु¥र्‍याउने भनिएको थियो त्यहाँ पु¥र्‍याउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक गर्ने पार्टी भएकाले फर्कने पुल भ’त्किसकेकाले अगाडिको बाटोमा समस्या आए हल गर्दैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अलिकति बृहत् सहमति कायम गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटै मान्छे सधैं अध्यक्ष हुँदैन उसले छोड्नुपर्छ तर एउटा प्रकृयाबाट ।’
Prevमहमा अमला डुबाएर दैनिक खाँदा हुन्छ विश्वासै नलाग्ने यस्तो चमत्कार…पुरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।
Nextअमेरिकाको उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिस – पहिलो महिला अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति…हार्दिक बधाई !
दुईमध्ये एक पद छोड्दा राम्रो हुने’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनियाँ राजदूतको सुझाव…हेर्नुहोस् ।